Iyo ecosystem yeLifecycle Kushambadzira | Martech Zone
Muvhuro, October 8, 2012 Chitatu, October 10, 2012 Jenn Lisak Golding
Kuteerera hweupenyu kushambadzira yakakosha pamusika wanhasi, ndosaka ndakafadzwa kushanda nemutengi wangu, Right On Interactive, mukugadzira nekugadzira infographic nezvenyaya iyi chaiyo. Iyo infographic inovhara zvese kubva kutungamira chizvarwa kusvika kushambadzira otomatiki kutendeuka, pamwe nekugadzirisa matambudziko uye ramangwana munzvimbo ino.
Sezvo kushambadzira michina iri pasi pemakore gumi, isu tichiri kudzidza nezve iyo indasitiri uye kuti ingashandiswa sei kuzadzisa zvinangwa zvedu zvekushambadzira. Iyi infographic inosimbisa chokwadi chekuti isu tiri kusangana nekukurumidza kukura mundima iyi, uye isu tinofanirwa kuve nemaitiro munzvimbo yekusvikira tarisiro nevatengi kuburikidza akawanda ekubata mapoinzi. Asi zvakare zvinoratidza kuti zvinhu zviri kuchinja nekukurumidza.
Iwe unofunga sei kushambadzira otomatiki uye hwehupenyu hwekutengesa kuchachinja pane rinotevera gore? Makore mashanu anotevera?
Gumiguru 8, 2012 na12: 51 PM
Kutenda nekugovana, vakomana! Wakanga uri mufaro kushanda nemi mese kudhonza iyi infographic pamwechete. Ini ndinofunga kutsvagurudza kwedu kwekuona uku kwakaratidza zvinoshamisa. Iyo yekushambadzira tekinoroji nzvimbo irikushanduka pamwero unoshamisa - ndinogona kutaura kubva kuzviitiko zvekuzvionera kuti kushambadzira otomatiki mhinduro pamwe chete nemazano matsva ekushambadzira ndizvo zvitsva zvinodikanwa zvesangano. Ndangoverenga mangwanani ano kubva kuSirius Sarudzo blog kuti huwandu hwemakambani eB2B anoshandisa kushambadzira otomatiki ari kukura nekukurumidza, navo vachifungidzira kuti huwandu huchawedzera ne50% na2015. Taura nezvekuwedzera kwekuwedzera.
Kune avo venyu vari kunze uko vanofunga kushandisa mhinduro kekutanga, heino chidimbu changu chakakosha chezano: ita shuwa kuti iwe une mudiwa akasimba ane nhanho yakasununguka yemasevhisi akaisirwa muchibvumirano. Kubudirira kwekushandisa kwekushambadzira otomatiki mhinduro kunoenderana zvachose nekuitwa kwakakodzera uye mashandisirwo - uye zviri nyore kwazvo nguva yekutanga kutenderera.